बुधबार बढ्यो यूके पाउण्ड र कतारी रियालको भाउ, हेर्नुहोस अन्य देशको कति ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /International/बुधबार बढ्यो यूके पाउण्ड र कतारी रियालको भाउ, हेर्नुहोस अन्य देशको कति ?
बुधबार बढ्यो यूके पाउण्ड र कतारी रियालको भाउ, हेर्नुहोस अन्य देशको कति ?
काठमाडौँ, जेठ १४ – आज बुधबार यूके पाउण्ड र कतारी रियालको भाउ उकालो लागेको छ । त्यस्तै आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ७६ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तैगरी आज जेठ १४ गते मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ६८ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ। भने आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३३ रहेको छ।
त्यस्तैगरी आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९० रुपैयाँ ७० पैसा तथा बिक्रिदर ३९२ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ। भने आज बुधबार युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। आज नेपाली बजारमा हराईन दिनार एकको खरिददर ३१९ रुपैयाँ ८२ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ।
भने आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३२ रुपैयाँ २८ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३२ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २८ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ। भने आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ।
विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एक करोड ५६ लाख नाघ्यो
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प हि न्दू भगवानको श रणमा, हि न्दू प ण्डित बो लाएर वेद पाठ गराए
चीनद्वारा महत्वाकांक्षी मंगल यान प्रक्षेपण
रुसका प्रधानमन्त्री मिशुस्तिनलाई कोरोना संक्रमण